Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. ‘रोगलाई जितेँ, समाजसँग हारेँ’ – Emountain TV
काठमाडौँ, २४ फागुन । गौर – ६१ वर्षीय इन्द्रदेव राम कुष्ठरोगी थिए । रोग लागेपछि उनलाई उपचार गराउनुको साटो आफन्तले गाउँबाट निकाला गरे । तर, निको भइसके पनि गाउँ जान सकेका छैनन् । उनी रौतहट परोहा, ५ बंकुल जाने सडक किनारमा चार वर्षदेखि बस्दै आएका छन् ।
उनका आफन्त परोहकै नमग्रमा टोलमा बस्छन् । उनको घर त्यही थियो । छिमेकी पनि उस्तै छन् । सम्पत्ति केही छैन । ‘रोगलाई जितेँ, समाजसँग हारेँ,’ उनले भने ।
उनले ३० वर्ष भारतको पन्जाबमा मजदुरी गरे । उनलाई ६ वर्षअघि कुष्ठरोग लाग्यो । हात गोडाका औँलामा घाउ देखियो । उनले उतै उपचार गराए तर निको भएन । काम गर्न नसक्ने भएपछि उनी नेपाल फर्किएका थिए ।
घर आएपछि छिमेकी, आफन्तले कोर (कुष्ठ) आएको भन्दै गाउँमा बस्न दिएनन् । त्यसपछि उनको बसोबास सडक किनारामा हुन थाल्यो । आफन्तले भाँडाकुडा दिएर झुपडी बनाइदिए । उनी चार वर्षदेखि त्यही बस्दै आएका छन् । यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा छापिएको छ ।